ရန်ကုန်မြို့က Covid-19ရောဂိါပိုးစစ်ဆေးခံနေသူတဦး၊ အောက်တိုဘာ ၇၊ ၂၀၂၀။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ဖြစ်နှုန်း တရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာနေပြီး၊ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မူတွေနဲ့ သေဆုံးမူပိုများလာတာတွေကို မြို.ကြီးတွေမှာပါ စကြုံလာနေရပြီလို့၊ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေဘက်က လိုအပ်လာတဲ့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ လူနာကုတင်တွေဖြည့်တာကို အလေးထားလုပ်နေပေမဲ့၊ မြို.ကြီးတချို.မှာပါ အလျှင်မမီသလောက်စဖြစ်လာနေပြီလို့၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းအကြံပေးတွေနဲ့ ပရဟိတသမားတွေက ဆိုပါတယ်။
အခုပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွားသင့်ပါလဲ။ မကြာခင်ကပြန်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ ကိုဗစ်-19 ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ နာယကနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဒေါက်တာဖေသက်ခင်နဲ့၊ မန္တလေး ပရဟိတမင်းခေါင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်တင်တို့ကို ကိုဝင်းမင်းက မနေ့ညက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့။ မန္တလေးမြို့ကြီးမှာလည်း အောက်စီဂျင်နဲ့ ဆေးရုံအလျင်မမီတော့ပဲ သေဆုံးမှုမြင့်တက်လာပုံကို ဦးခင်မောင်တင် က...
ဦးခင်မောင်တင် ။. ။ အခုဟာက လူတိုင်း လူတိုင်းက ဖျားရင် အောက်စီဂျင် ထိုးကျသွားတာ ပြန်တက်ဖို့ ခက်တယ်။ အခု အဲဒါတွေနဲ့ပဲ အိမ်တွေမှာလည်းသေဆုံးနေကြတယ်။ ဆေးရုံမှာလည်း မနေ့ကတော်တော်လေး သေဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့။ ဒီနေ့သေဆုံးမှုက အပြင်ပန်းက သံသယတွေကောတွက်မယ်ဆိုရင် ၃ဝ ပတ်ချာလည်လောက်တော့ရှိမယ်ဗျ။ အခုညကို ဆေးရုံဆေးခန်းတွေက လက်မခံဖြစ်ပြီးတော့ ကားပေါ်တင် သေဆုံးတာကိုက ၂ ယောက်ရှိသွားပြီ။ အခုညကို ကျနော်တို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ လက်ရှိ ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းမှာ ကာကွယ်ကု့သရေးအတွက် အစွန်း ၂ဖက်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပုံနဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း ဒေါက်တာဖေသက်ခင် က...
ဒေါက်တာဖေသက်ခင် ။. ။ လုံးဝမကြောက်ပဲနဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန က ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ မလိုက်နာပဲနဲ့ မကြောက်တဲ့လူတွေက ရှိသလို တအားအကြောက်လွန်ပြီးတော့ panic buying ဟိုဟာတွေဝယ် ဒီဟာတွေဝယ် ၊ အမှန်ကတော့ ပြည်သူမပါပဲနဲ့ ကျနော်တို့က ဘာမှလုပ်မရဘူး။ ပညာရှင်တွေချည်းလုပ်လို့မရဘူး။ အစိုးရချည်းလည်း လုပ်လို့မရဘူး။ အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့မှ အထိအခိုက် အကျအနာ အနည်းဆုံးနဲ့ ကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဗျ။ ပါဝင်တဲ့နေရာမှာလည်း တတ်နိုင်သမျှ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အခါအားလျှော်စွာ အချက်အလက်တွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေါ့ဗျာ။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ အဲဒီတော့ အခါတတိယလှိုင်း စတက်လာတာကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အဓိက ဘာလိုပါလဲလို့မေးရာမှာ ဦးခင်မောင်တင် က .....
ဦးခင်မောင်တင် ။. ။ အဓိက ကတော့ အောက်စီဂျင်ပေါ့။ ကျနော်တို့ ပထမလှိုင်း၊ ဒုတိယလှိုင်းမှာတုံးက ဒီလောက်ကြီး မဆိုးခဲ့ဘူး။ အခုဟာက အောက်စီဂျင်က ထိုးထိုးကျသွားတာ။ ပထမ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်မကဘူး။ ကျနော်တို့မှာ နောက်ထပ်အလုပ်တခုက ပြည်သူတွေရဲ့ ညစဉ်ဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းတော့ ကျနော်တို့က အောက်စီဂျင်ဝယ်ပြီးတော့ ကုသိုလ်ပြုတာလည်း မနိုင်ဘူး။ ဘယ်မှဝယ်မရ။ အဲဒီအောက်စီဂျင်အိုးဝယ်မရတာကကို ပိုဆိုးနေတာက အောက်စီဂျင်လေက ကျနော်တို့က ၄ဝလီတာပေါ့။အဲဒီဟာနဲ့ပေးတော့ အဲဒီအိုးကြီးတွေက ဘယ်မှာဖြည့်လို့ဖြည့်ရမှန်းလည်းမသိဘူး။ တချို့ဆို အောက်စီဂျင်က နာရီဝက်တောင် အပြတ်မခံဘူး။ အခုစက်ရုံကြီးတွေကလည်း ဒီနေ့သွားပို့လည်း နောက်နေ့မှရတယ်။ အဲဒီမှာတင် အောက်စီဂျင်တွေက မနိုင်မနင်းဖြစ်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေက အောက်စီဂျင်ကျမှုနဲ့ သေဆုံးတာတွေက တော်တော်များလာတယ်။
ဦးဝင်းမင်း ။. ။ ဒီနေရာမှာ ကျန်းမာရေး နဲ့ အားကစားဝန်ကြီး ဒေါက်တာ သက်ခိုင်ဝင်း ကြိုးပန်းနေပေမယ့် စိန်ခေါ်မှုလည်းရှိနေပုံကို ဒေါက်တာ ဖေသက်ခင် က...
ဒေါက်တာဖေသက်ခင် ။.။ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန က သူလုပ်နိုင်တာ တိုးချဲ့ဖွင့်နေတယ်။ မနေ့က မနက်ပဲ ဆရာသက်ခိုင်ဝင်း ပြောတာက ၃ဝဝခန့်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ် ချက်ချင်းပြည့်သွားတယ်။ ထပ်ဖွင့်ဖို့တွေလည်းရှိတယ်။ အောက်စီဂျင်ရရှိရေးကလည်း စက်ရုံတွေကလုပ်နေပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာ လုံးဝပြည်စုံပြီလို့ ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့။ တတ်နိုင်သမျှလုပ်နေကြတယ်။ ဒါပေမယ်limitation တွေကတော့ရှိတယ်။
ဦးဝင်းမင်း ။. ။ အဓိက အသက်သမျှ အောက်စီဂျင်ရရေး ဘယ်လိုအကြံပြုချင်ပါလဲလို့မေးရာမှာ.....
ဦးခင်မောင်တင် ။. ။ တချို့ ပုဂ္ဂိုလိကစက်ရုံတွေက တချို့ မန္တလေးစက်ရုံတွေက ကလေးမြို့က မန္တလေးထက်ဆိုးတော့ အဲဒီဖက်နယ်တွေကို အဓိကထားပို့နေရတာ။ ကျနော်တို့ မန္တလေးမှာက လုံးဝလုံလောက်မှုမရှိဘူး။ ပြတ်လပ်မှုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ ဒီအောက်စီဂျင်ပိုင်းမှာ အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးစေချင်တယ်ပေါ့။ အခုနယ်စပ်တွေမှာကလည်း အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာ။ ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့လေ။ တရုတ်ကဖြစ်ဖြစ် ထိုင်းကဖြစ်ဖြစ် နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေ လွယ်ကူစွာပေါ့။ အခု ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်မှဝယ်မရတော့ ရန်ကုန်မှာလည်း မရှိတော့ မန္တလေးမှာလည်းမရှိတော့ ဘယ်မှဝယ်မရတဲ့အတွက် ဒီဓါတ်ငွေအိုးတွေကို ဝယ်ရဖို့အတွက် ပြည်သူတွေကိုယ်စား ပြန်ကြားချင်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ တကယ်တော့ လက်ရှိကမ္ဘာမှာ ပြင်းထန်ဆုံး ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတွေ့အပြီး ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းစပြင်းထန်ချိန်မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအားနည်းချိန်နဲ့ သွားတိုက်ဆိုင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုကြီးကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈဖွဈနှုနျး တရိပျရိပျမွငျ့တကျလာနပွေီး၊ အောကျဆီဂငျြပွတျလတျမူတှနေဲ့ သဆေုံးမူပိုမြားလာတာတှကေို မွို.ကွီးတှမှောပါ စကွုံလာနရေပွီလို့၊ ကြှမျးကငျြသူတှကေ ဆိုပါတယျ။
ကနျြးမာရေးတာဝနျရှိသူတှဘေကျက လိုအပျလာတဲ့ အောကျဆီဂငျြနဲ့ လူနာကုတငျတှဖွေညျ့တာကို အလေးထားလုပျနပေမေဲ့၊ မွို.ကွီးတခြို.မှာပါ အလြှငျမမီသလောကျစဖွဈလာနပွေီလို့၊ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ထိပျတနျးအကွံပေးတှနေဲ့ ပရဟိတသမားတှကေ ဆိုပါတယျ။
အခုပွဿနာတှကေို ဘယျလိုကြျောလှားသငျ့ပါလဲ။ မကွာခငျကပွနျဖှဲ့လိုကျတဲ့ ကိုဗဈ-19 ကပျရောဂါဆိုငျရာအကွံပေးအဖှဲ့ နာယကနဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဟောငျး ဒေါကျတာဖသေကျခငျနဲ့၊ မန်တလေး ပရဟိတမငျးခေါငျရှာဖှကေယျဆယျရေးအဖှဲ့ ဥက်ကဌ ဦးခငျမောငျတငျတို့ကို ကိုဝငျးမငျးက မနညေ့က မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့။ မန်တလေးမွို့ကွီးမှာလညျး အောကျစီဂငျြနဲ့ ဆေးရုံအလငျြမမီတော့ပဲ သဆေုံးမှုမွငျ့တကျလာပုံကို ဦးခငျမောငျတငျ က...
ဦးခငျမောငျတငျ ။. ။ အခုဟာက လူတိုငျး လူတိုငျးက ဖြားရငျ အောကျစီဂငျြ ထိုးကသြှားတာ ပွနျတကျဖို့ ခကျတယျ။ အခု အဲဒါတှနေဲ့ပဲ အိမျတှမှောလညျးသဆေုံးနကွေတယျ။ ဆေးရုံမှာလညျး မနကေ့တျောတျောလေး သဆေုံးခဲ့တယျပေါ့။ ဒီနသေ့ဆေုံးမှုက အပွငျပနျးက သံသယတှကေောတှကျမယျဆိုရငျ ၃ဝ ပတျခြာလညျလောကျတော့ရှိမယျဗြ။ အခုညကို ဆေးရုံဆေးခနျးတှကေ လကျမခံဖွဈပွီးတော့ ကားပျေါတငျ သဆေုံးတာကိုက ၂ ယောကျရှိသှားပွီ။ အခုညကို ကနြျောတို့ သှားရောကျဆောငျရှကျပေးနရေတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ လကျရှိ ကိုဗဈ တတိယလှိုငျးမှာ ကာကှယျကု့သရေးအတှကျ အစှနျး ၂ဖကျနဲ့ ရငျဆိုငျနရေပုံနဲ့ ဖွဈစဉျကိုလညျး ဒေါကျတာဖသေကျခငျ က...
ဒေါကျတာဖသေကျခငျ ။. ။ လုံးဝမကွောကျပဲနဲ့ ကနျြးမာရေး နဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန က ထုတျပွနျထားတာတှေ မလိုကျနာပဲနဲ့ မကွောကျတဲ့လူတှကေ ရှိသလို တအားအကွောကျလှနျပွီးတော့ panic buying ဟိုဟာတှဝေယျ ဒီဟာတှဝေယျ ၊ အမှနျကတော့ ပွညျသူမပါပဲနဲ့ ကနြျောတို့က ဘာမှလုပျမရဘူး။ ပညာရှငျတှခေညျြးလုပျလို့မရဘူး။ အစိုးရခညျြးလညျး လုပျလို့မရဘူး။ အားလုံးပါဝငျပွီးတော့မှ အထိအခိုကျ အကအြနာ အနညျးဆုံးနဲ့ ကြျောလှားနိုငျမှာဖွဈတယျဗြ။ ပါဝငျတဲ့နရောမှာလညျး တတျနိုငျသမြှ အားကစားဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျထားတဲ့ အခါအားလြှျောစှာ အခကျြအလကျတှကေို လိုကျနာဆောငျရှကျပေါ့ဗြာ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲဒီတော့ အခါတတိယလှိုငျး စတကျလာတာကို ကြျောလှားနိုငျဖို့ အဓိက ဘာလိုပါလဲလို့မေးရာမှာ ဦးခငျမောငျတငျ က .....
ဦးခငျမောငျတငျ ။. ။ အဓိက ကတော့ အောကျစီဂငျြပေါ့။ ကနြျောတို့ ပထမလှိုငျး၊ ဒုတိယလှိုငျးမှာတုံးက ဒီလောကျကွီး မဆိုးခဲ့ဘူး။ အခုဟာက အောကျစီဂငျြက ထိုးထိုးကသြှားတာ။ ပထမ သယျယူပို့ဆောငျရေးတငျမကဘူး။ ကနြျောတို့မှာ နောကျထပျအလုပျတခုက ပွညျသူတှရေဲ့ ညစဉျဖုနျးဆကျအကူအညီတောငျးတော့ ကနြျောတို့က အောကျစီဂငျြဝယျပွီးတော့ ကုသိုလျပွုတာလညျး မနိုငျဘူး။ ဘယျမှဝယျမရ။ အဲဒီအောကျစီဂငျြအိုးဝယျမရတာကကို ပိုဆိုးနတောက အောကျစီဂငျြလကေ ကနြျောတို့က ၄ဝလီတာပေါ့။အဲဒီဟာနဲ့ပေးတော့ အဲဒီအိုးကွီးတှကေ ဘယျမှာဖွညျ့လို့ဖွညျ့ရမှနျးလညျးမသိဘူး။ တခြို့ဆို အောကျစီဂငျြက နာရီဝကျတောငျ အပွတျမခံဘူး။ အခုစကျရုံကွီးတှကေလညျး ဒီနသှေ့ားပို့လညျး နောကျနမှေ့ရတယျ။ အဲဒီမှာတငျ အောကျစီဂငျြတှကေ မနိုငျမနငျးဖွဈပွီးတော့ ပွညျသူတှကေ အောကျစီဂငျြကမြှုနဲ့ သဆေုံးတာတှကေ တျောတျောမြားလာတယျ။
ဦးဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ ကနျြးမာရေး နဲ့ အားကစားဝနျကွီး ဒေါကျတာ သကျခိုငျဝငျး ကွိုးပနျးနပေမေယျ့ စိနျချေါမှုလညျးရှိနပေုံကို ဒေါကျတာ ဖသေကျခငျ က...
ဒေါကျတာဖသေကျခငျ ။. ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန က သူလုပျနိုငျတာ တိုးခြဲ့ဖှငျ့နတေယျ။ မနကေ့ မနကျပဲ ဆရာသကျခိုငျဝငျး ပွောတာက ၃ဝဝခနျ့ဖှငျ့လိုကျတယျ။ ဒါပမေယျ ခကျြခငျြးပွညျ့သှားတယျ။ ထပျဖှငျ့ဖို့တှလေညျးရှိတယျ။ အောကျစီဂငျြရရှိရေးကလညျး စကျရုံတှကေလုပျနပေမေယျ့ လကျရှိအခြိနျမှာ လုံးဝပွညျစုံပွီလို့ ပွောလို့မရသေးဘူးပေါ့။ တတျနိုငျသမြှလုပျနကွေတယျ။ ဒါပမေယျlimitation တှကေတော့ရှိတယျ။
ဦးဝငျးမငျး ။. ။ အဓိက အသကျသမြှ အောကျစီဂငျြရရေး ဘယျလိုအကွံပွုခငျြပါလဲလို့မေးရာမှာ.....
ဦးခငျမောငျတငျ ။. ။ တခြို့ ပုဂ်ဂိုလိကစကျရုံတှကေ တခြို့ မန်တလေးစကျရုံတှကေ ကလေးမွို့က မန်တလေးထကျဆိုးတော့ အဲဒီဖကျနယျတှကေို အဓိကထားပို့နရေတာ။ ကနြျောတို့ မန်တလေးမှာက လုံးဝလုံလောကျမှုမရှိဘူး။ ပွတျလပျမှုဖွဈနတေဲ့အတှကျ ဒီတာဝနျရှိတဲ့သူတှကေတော့ ဒီအောကျစီဂငျြပိုငျးမှာ အတတျနိုငျဆုံးဖွညျ့ဆညျးပေးစခေငျြတယျပေါ့။ အခုနယျစပျတှမှောကလညျး အဆငျမပွဘေူးဖွဈနတော။ ကိုယျနိုငျငံအတှကျပေါ့လေ။ တရုတျကဖွဈဖွဈ ထိုငျးကဖွဈဖွဈ နယျစပျဂိတျတှကေနေ လှယျကူစှာပေါ့။ အခု ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဘယျမှဝယျမရတော့ ရနျကုနျမှာလညျး မရှိတော့ မန်တလေးမှာလညျးမရှိတော့ ဘယျမှဝယျမရတဲ့အတှကျ ဒီဓါတျငှအေိုးတှကေို ဝယျရဖို့အတှကျ ပွညျသူတှကေိုယျစား ပွနျကွားခငျြပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ လကျရှိကမ်ဘာမှာ ပွငျးထနျဆုံး ကိုဗဈမြိုးကှဲသဈ မွနျမာနိုငျငံမှာ စတှအေ့ပွီး ကိုဗဈ တတိယလှိုငျးစပွငျးထနျခြိနျမှာ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးအားနညျးခြိနျနဲ့ သှားတိုကျဆိုငျတဲ့ စိနျချေါမှုကွီးကိုလညျး ရငျဆိုငျနရေတယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ ဆိုပါတယျခငျဗြာ။
ကိုဗစ်ပိုး သဘောသဘာဝ နဲ့ သုတေသန